မတျ 10, 2020 – Healthy Life Journal
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်(Covid-19)ကြောင့် သားသမီးအတွက် မိခင်ရဲ့စိတ်ပူပန်မှုသက်သာအောင် ဘာလုပ်သင့်သလဲ. . .
ဒေါက်တာအုန်းကျော် (စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ဖြေကြားသည်။ Q. အခုကမ္ဘာအနှံ့ဖြစ်နေတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျွန်မအကြောက်လွန်နေလို့ပါ။ သားနဲ့သမီးက စာမေးပွဲပြီးသွားလို့ တော်သေးပေမယ့် သူတို့ကို သင်တန်းတွေမတက်ခိုင်းရဲဘူး ဖြစ်နေပါတယ်။ သူတို့က ပန်းချီသင်တန်း၊ ရေကူးသင်တန်း တက်ချင်တယ်လို့ ပူဆာနေတာ ကျွန်မစိတ်ထဲ စိုးရိမ်စိတ်များနေလို့ ဝေခွဲမရဖြစ်နေပါတယ်။...
ပင်မှည့်သီး၏ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးများ
လူအများစုဟာ ပင်မှည့်သီးခေါ်စူကာသီးကို ဖျော်ရည်ဖျော်သောက်ကြတာများပါတယ်။ ပင်မှည့်သီးဖျော်ရည်မှာ အယ်လ်ကာလွိုက်တွေပါဝင်ပြီး သွေးတိုးကျတာ၊ စိတ်ငြိမ်သက်တာ၊ ကြွက်တက်မှုလျော့ကျတာ စတဲ့အာနိသင်တွေ ရှိပါတယ်။ ပင်မှည့်ပင်က ပွင့်တဲ့ပန်းဟာ စိတ်ငြိမ်စေတဲ့ အာနိသင်အနည်းငယ်ရှိပြီး အိပ်မောကျစေပါတယ်။ ပင်မှည့်ပန်းဟာ နာ့ဗ်ကြောအလုပ်လုပ်လွန်တဲ့ ရောဂါကုသမှုမှာ အသုံးဝင်ပြီး အလွယ်တကူ စိတ်လှုပ်ရှားလွယ်တဲ့ ကလေးတွေကို...